မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘလော့ရေးသားမှု - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘလော့ရေးသားမှုကို ယေဘူယျအားဖြင့် ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော် မြန်မာဘလော့များ ၏ ကနဦးအစမှာ မြန်မာဖောင့် အခက်အခဲကြောင့် အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားသော ဘလော့များသာ ရှိခဲ့သည်။ မြန်မာစာများကို JPG ဖိုင်များဖြင့် ပုံအဖြစ် တင်သော ဘလော့အချို့ ရှိခဲ့သကဲ့သို့ ဝင်းမြန်မာဖောင့်များကို အသုံးပြုသည်များ လည်းရှိခဲ့သည်။ ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်အား Alpha Mandalay မှ အခမဲ့ဖြန့်ချိ သောအခါ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားသော မြန်မာဘလော့များ အများအပြား ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ၁ရက်နေ့တွင် မြန်မာဘလော့ဂါများမှ ဦးစီးကာ Myanmar ICT Park (ယခု Myanmar Info-Tech) တွင် ဘလော့စီမီနာကို ခမ်းနားစွာ ပထမဆုံး အကြိမ် ကျင်းပ နိုင်ခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာအရေးအခင်း ပြီးနောက်တွင် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသား ထားသော အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး မြန်မာဘလော့များ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် စစ်အစိုးရမှ ဘလော့ဝန်ဆောင်မှု ပေးသော ဆိုက်တော်တော်များများကို ပိတ်ပစ်ခဲ့သလို အချို့ဘလော့ရေးသားသူများကိုလည်း ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခဲ့သည်။
မြန်မာဘလော့ကာ အများအပြားသည် ပလန်းနက်ဖိုရမ်နှင့် အခြားသော ဖိုရမ်များမှ လာသူများ ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာ့ အင်တာနက် ခေတ်ဦးတွင် ဖိုရမ်များသည် အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးရာ နေရာ အပြင် စာပေ အနုပညာများ တင်နိုင်သော နေရာများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာလို ရေးသားသော မြန်မာဘလော့များ၏ စတင်သူမှာ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည်ဟု ပြောရန် ခက်ခဲသော်လည်း ဇော်ဂျီယူနီကုဒ် ဖောင့်ကို ဘလော့တွင် ထည့်သွင်း၍ နည်းပညာ စတင် မျှဝေ ပေးခဲ့သူမှာ ညီလင်းဆက် ဖြစ်သည်ဟု လူသိများ ကြသည်။ ၎င်းနောက် မန္တလေးမှ ကိုမောင်လှ မှ လဲ ကြည့်ရှုသူများ၏ စက်ထဲတွင် မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင်းစရာ မလိုပဲ မြန်မာစာကို မြင်နိုင်သော နည်းပညာ တစ်ခုကို မျှဝေ ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာ နှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀၀၇ နှစ်ဦးပိုင်း တွင်တော့ မြန်မာလို ရေးသားသော ဘလော့များ အမြောက်အများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ မြန်မာဘလော့ကာ ခေတ်ဦးပိုင်းရှိ ဘလော့ဂါများ၏ ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ဘလော့ဂါများ စုစည်းကာ MBS ခေါ် မြန်မာဘလော့ဂါအသိုက်ဝန်း ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင် နိုင်ခဲ့သည်။ MBS ၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ ‘We Blog,we unite’ ဖြစ်သည်။
မြန်မာဘလော့ဂါများ အများဆုံး အသုံးပြုသော ဘလော့နည်းပညာ ပလက်ဖောင်းမှာ blogspot နှင့် wordpress တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကနဦးဘလော့ အများစုမှာ blogspot ကို အသုံးပြုထားသော ဘလော့များ ဖြစ်ကြပြီး ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် blogspot များဝင်ရောက်ရ ခက်ခဲသွားခြင်းများ ကြောင့် wordpress ကို အသုံးများလာကြပြန်သည်။ အချို့သော ဘလော့များသည် CMS နည်းပညာ ကို အသုံးပြု၍လည်း ဘလော့တည်ဆောက် ထားကြသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ဘလော့နည်းပညာနှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုသော widget များအနက် မြန်မာဘလော့ဂါ အသိုင်းဝိုင်းအတွင်း အသုံးများသော widget တစ်ခုမှာ CBOX ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် chat box သို့မဟုတ် shout box ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး ဘလော့အဝန်းအဝိုင်း အတွင်းတွင် ဖြစ်စေ၊ ဘလော့ဖတ်သူများ နှင့် ဘလော့ကာများ ကြားတွင် ဖြစ်စေ ကြားခံ အသုံးပြုသော ဆက်သွယ်ရေး widget ဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့ထားသော ဘလော့များကို RSS Feed ဖြင့် အလွယ် တကူ ဖတ်ရှုနိုင်သော Google Reader မှာလည်း ဘလော့ဖတ်ရှုသူများ အသုံးများကြသည်။ မြန်မာဘလော့ အများစုသည် ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖြင့် ရေးသားကြသော်လည်း ယခုအခါ တစ်ချို့သော ဘလော့များသည် မြန်မာယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလာကြသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်နှင့်ရော မြန်မာယူနီကုဒ်ဖြင့်ပါ ဖတ်ရှုနိုင်အောင် မြန်မာယူနီကုဒ် ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုငွေထွန်းမှ on the fly ခေါ် ယူနီကုဒ် converter ကိုရေးသား ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာဘလော့ဂါများသည် micro blogging ဖြစ်သော twitter ကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။
နေဘုန်းလတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှားသော ဘလော့ရေးသားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအား လှောင်ပြောင်သော ကာတွန်းပုံတစ်ခုကို တင်ခဲ့သည့်အတွက် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
↑ Archived copy။ 2012-06-28 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-01-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (2013) Myanmar Internet and E-Commerce Investment and Business Guide - Regulations and Opportunities (in en). Lulu.com. ISBN 978-1-4387-3445-3။
↑ "Myanmar blogger jailed for 20 years - CNN.com"၊ CNN၊ 11 November 2008။
↑ MBS (Myanmar Bloggers Society) Archived September 5, 2011, at the Wayback Machine.
↑ "After four years in jail, Burmese blogger finds country on cusp of change" (in en)၊ The France 24 Observers၊ 25 January 2012။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံရှိ_ဘလော့ရေးသားမှု&oldid=517052" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။